ENROFLOKS EE SHIMBIRAHA: TILMAAMAHA ISTICMAALKA - BEERAHA DIGAAGA
Neefsashada guusha ah ee digaagga waa wax aan macquul ahayn iyada oo aan la isticmaalin walxo bakteeriyooyin ah iyo kuwo ka hortag ah. Ka mid ah daroogooyinka badan oo loogu talagalay daaweynta digaaga beeraha, Enroflox waa caan ka ah 10%, taas oo saameeysa noocyo kala duwan oo ah jeermiska. Iyada oo ku saleysan tilmaamaha la ansixiyay ee soo-saaraha ee isticmaalka, waan kuu sheegi doonaa daawada iyo qiyaasta ay u baahan tahay.
Ma taqaanaa? Sababaha ugu muhiimsan ee dhimashada digaagga, gaar ahaan gunnada maalinlaha ah, waa cunto yaryar oo tayo leh, cunto caafimaad leh oo aan caafimaad lahayn iyo cudurrada bakteeriyadu, oo ka xanaajiya xaaladaha liita ee digaaga.
Waa maxay Enrofloks: qaabka iyo foomka sii deynta
Daroogada "Enrofloks" waxaa sameeya soo saaraha Isbanish "Veterinaria S.A. VVVAA" waxaana laga diiwaangaliyaa daawada caafimaadka xoolaha sida daawada antimicrobial Isticmaalka afka, oo saameyn ku leh bakteeriyada-gram-positive iyo gram-negative negative.
Daawada waxaa ku jira kiimikada firfircoon ee enrofloxacin, kaas oo ka kooban 100 mg 1 ml oo ah diyaarinta, iyo qaybo caawiya, kuwaas oo ah baasiin benzene, potassium hydroxide, biyo distile ah.
Macnaheedu waa xalka dareeraha ah ee hooska huruud ah, oo ah qaab isku mid ah. Waxaa laga helaa dhalooyin caag ah, oo leh awood 100 mg ah, oo lagu buuxiyey sanduuqyada kartoonada, iyo sidoo kale dhalooyinka caaga ah ee daboolan leh, oo ay ku xiran tahay xakamaynta furitaanka hore.
Daawada walxaha firfircoon enrofloxacinKaas oo, sida laga soo xigtay edbinta, waxaa loola jeedaa fluoroquinol ah, waxa ay saamayn ku sheyga nooca: Staphylococcus, Pasteurella, Bacteroides, Mycoplasma, Campylobacter, Haemophilus, Pseudomonas, Streptococcus, Escherichia coli, Corynebacterium, Clostridium, Actinobacillus, Bordetella, Erysipelothrix, Klebsiella.
In jirka ee xayawaanka diirran iyo digaagga, daroogada daroogada DNA enzymes DNA, ka hortagga malic acid ka soo baxa deegaanka bakteeriyada. Natiijo ahaan, guuldareysiga DNA-ga wuxuu u dhacaa.
Isticmaalka Enroflox waxaa weheliya nuugid fiican oo ka mid ah walxaha firfircoon ee daroogada ee dhammaan unugyada iyo xubnaha jirka, iyo sidoo kale xakamaynta horumarinta microbes. Dhiigga, diirada ugu weyn ee enrofloxacin waxaa la gaarsiiyaa hal saac iyo badh ka dib marka la codsado oo uu sii socdo ilaa 6 saacadood. Qaad daaweyn ah ayaa lagu hayay unugyada maalintii oo idil.
Intaas waxaa sii dheer, qaybta firfircoon ee qayb ahaan ayaa lagu qiyaasaa ciprofloxacin. Ka qaadida daawada jirka waxay ka dhacdaa kaadida iyo saxarada.
Ma taqaanaa? Sababtoo ah la'aanta hawo nadiif ah, chicks ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo jirro joogto ah oo neef-qabatin leh. Sidaa darteed, dhismaha meesha digaagga lagu hayo waxaa lagula talinayaa in lagu qalajiyo dhowr jeer maalintii.
Tilmaamaha isticmaalka daroogada
"Enrofloks" waxaa lagula talinayaa bedelida shimbiraha yar yar ee daaweynta colibacillosis, mycoplasmosis, salmonellosis, streptococcus, necrotic enteritis, infakshanka nooca isku dhafan iyo kuwa labaad, cudurrada kale ee bakteeriyada, cudurada ay u nugul yihiin fluoroquinol.
Daaweynta cudurrada digaagga waxay isticmaalaan daroogooyinka sida: Solikoks, Baytril, Amprolium, Baykoks, Enrofloksatsin, Enroksil.
Go'aanka iyo habka loo isticmaalo
Daaweynta daawada laguu qoray kaliya digaagga. Qalabka laguma talinayo digaagga qaangaarka ah, turkiga, shimbiraha iyo baaskiilada ee la xidhiidha waxyaallaha maqan ee daaweynta noocaas ah. Xalka Enroflox, sida lagu muujiyey tilmaamaha ku lifaaqan isticmaalka, waxaa loo soo bandhigaa jidhka shimbirta habka afka.
Xilliga daaweynta, xooluhu waa in ay helaan biyo kaliya oo lagu qasi jiray daawada. Waxaa lagu shubaa cabitaan nadiif ah oo joogto ah, kaas oo la dhigo meel meel la gaari karo oo dhan. Ku celceli habka ay tahay inuu ku dhex jiro 5 ilaa 6 maalmood, cabitaanka maalinlaha ah. Si loo hubiyo isticmaalka habboon ee daroogada, waa in aad tixgelisaa qaadashada biyaha maalinlaha ah ee biyaha.
Isticmaaluhu wuxuu kugula talinayaa in uu u leexiyo daroogada noocyada kala duwan ee digaagga ee qiyaasaha ku habboon. Tusaale ahaan, 50 ml oo Enroflox ah halkii 100 litir oo biyo ah ayaa loo isticmaalaa digaagga broiler, goslings, poults turkey, ducklings, 5 ml / 10 l for digaagga caadiga ah.
Shimbiraha kale, oo ay ku jiraan kuwa loo yaqaan 'exotic ones', ayaa lagu daaweeyaa xal iyagoo isku mid ah sida turkiga yar yar. Inta lagu jiro xilliga qaadashada daawada, waxaa muhiim ah in la hubiyo in dadku si joogto ah loola socdo loona ilaaliyo. Haddii aan ka hadleyno shakhsiyaadka buka oo shakhsi ah, waa in lagu hayaa caqabadaha aan la cuni karin ee chicks oo caafimaad qaba.
Cudurada joogtada ah ee leh salmonellosis iyo infekshannada isku dhafan, iyo sidoo kale xaaladaha infekshanka fayraska ah ee daran, dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan qiyaasta Enroflox in la kordhiyo, tirinta qiyaasta cabbirka 100 ml / 100 l oo biyo ah.
Waa muhiim! Haddii aad seegtay wax daawo ah, koorsada ayaa dib loo bilaabay, kadib qiyaasta lagu tilmaamay tilmaamaha.
Digniinta iyo tilmaamaha gaarka ah
Inta lagu jiro muddada daaweynta, oo badanaa la daahiyo wiiggii, khubarada ayaa si xoog leh ugu talineysa inay xaddidaan joogitaanka muddada dheer ee digaagga ee qorraxda tooska ah.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ilaaliyo qiyaasaha soo-jeediyey ee soo-saaraha soo-saaraha iyo in aan lagu darin daawada antibiyootikada bacteriostatic sida: Levomycetin, Tetracycline, Macrolide, iyo sidoo kale steroids, daawada xinjirowga aan tooska ahayn iyo daaweynta daawada.
Si digaagdag ayaa sidoo kale ka mid ah: maqaarka, barxanaha, xamaamyada hilibka, shimbiraha guinea, dhirta.
Intaa waxaa dheer, Enrofloks, sida waafaqsan tilmaamaha, ha isku darin oo leh daawooyin ay ku jiraan kalsiyum, birta iyo aluminium. Waxyaabahaasi waxay caqabad ku yihiin nuugista walxaha firfircoon ee daroogada.
Tilmaamaha gaarka ah ee wax soo saaruhu waxay la xiriiraan ka hortagga shakhsi ahaaneed. Si loo dhammeeyo, waxaa la mamnuucayaa in la gowraco digaagga 11 maalmood ka dib dhammaadka koorsada daaweynta. Haddii loo baahdo in la gawraco khasaaraha, hilibka shimbirta jiran waxaa loogu talagalay in lagu quudiyo xayawaanka dhogorta leh.
Khilaafka suurtagalka ah iyo waxyeelada soo raaca
Xaaladaha xad-dhaaf ah ee daroogada ah waxaa laga yaabaa inay yeeshaan shuban, falcelin xasaasiyadeed, dysbiosis. Calaamadaha ugu horreeya ee dhacdooyinkaas, waxaa lagu talinayaa in la joojiyo isticmaalka dawada iyo baabi'inta xanuunka corticosteroids.
Enroflox laguma talineynin daawaynta chicks ee cudurada cagaarshowga, difaac ama kiniiniga kiniiniga, ka dib marka lagu wareejiyo infakshanka uu keeno streptococcus. Iyo sidoo kale for layahay digaag, tan iyo maaddooyinka firfircoon ee diyaarinta ku ururin kartaa ukunta.
Waa muhiim! Xaaladaha farsamooyinka isbarbar dhiga ee loo yaqaan 'Enroflox iyo maaddooyinka birta leh ee macdanta leh, waa in la joojiyaa mudada 4 saacadood ah inta u dhexeysa isticmaalka daroogada si looga fogaado dhibaatooyinka aan la rabin.
Daawada ku jirta baakada oo dhan waxaa lagu kaydin karaa 3 sano laga bilaabo taariikhda wax soosaarka. Kaydinta waa in laga ilaaliyaa iftiinka qorraxda, oo leh heer qoyan oo qoyan oo aan la geyn karin carruurta iyo xayawaanka. Heerkulka ugu wanaagsan ee kaydinta noocan ah waa laga bilaabo 0 ilaa +25 ° C.
Ka dib marka la isticmaalo qalabka, qashinka dhalooyinka nadiifka ah iyo weelasha kale, iyo sidoo kale alaab wakhtigoodu dhacay, ayaa lagu sameeyaa habka caadiga ah, iyada oo aan loo baahnayn wax tallaabooyin gaar ah.